Ama-Emojis e-WhatsApp kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo - EmojisWiki.com
Ama-Emojis e-WhatsApp kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
Izithombe-mzwelo zadalwa ngonyaka ka-1990 futhi zaba yisinyathelo esikhulu ekuguquleni indlela abantu abaxhumana ngayo besebenzisa imidiya yedijithali. Kusukela imvelaphi yabo baye basiza ekunikezeni incazelo engcono emibonweni futhi bakuvumela ukuthi uveze imizwa yakho noma imizwa yakho ngendlela ebanzi.
¿Ubuwazi ukuthi ungathola amakhulukhulu ama-emoji kukhibhodi yakho yedijithali?? Lezi ngokwemvelo zithatha indawo yezimpawu osekuyisikhathi eside zisetshenziswa ukumela izinkulumo ezithile ezinjengokumomotheka, izinhliziyo, noma ukuhleka okukhulu. Laba ubuso obuncane obunezinkulumo ezingapheli.
Ngenxa yalokhu okungenhla, kulesi sihloko sichaza uhlu lwezithonjana ezinencazelo yazo, uzokwazi ukuthi ama-emojis ayini, asetshenziselwa ini, aziwa kakhulu nokuningi.
Uhlu lwama-emoji nezithonjana ezinencazelo ngezigaba ze-WhatsApp ne-Facebook
I-WhatsApp Ukudla Neziphuzo Ama-Emojis Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
Ama-Emojis kanye Nezithombe-mzwelo zezimpawu ze-WhatsApp ezinencazelo
I-WhatsApp Animal Emojis kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
Umsebenzi we-WhatsApp kanye nama-Emoji Ezemidlalo kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
Ama-Emojis kanye Nezithombe-mzwelo Zezinto ze-WhatsApp ezinencazelo
Ukuvakasha kwe-WhatsApp Nezindawo Ama-Emojis kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
I-WhatsApp People Emojis kanye Nezithombe-mzwelo ezinencazelo
Yiziphi izithonjana noma ama-emojis?
Izithonjana zihlobene nezinhlamvu ezisetshenziswa ezifundazweni noma imiyalezo ye-elekthronikhi nezinkundla eziku-inthanethi ezifana ne-Instagram, i-WhatsApp noma i-Facebook emele imizwelo yabantu, izifiso, imibono noma imizwa ngendlela ehlukile ngokubukeka.
Njengoba sibonisile ekuqaleni umsuka wayo isi-japanese futhi igama layo libhalwe ngokuthi 絵⽂字 esakhiwe ngohlamvu “e” kanye negama elithi “moji”. Laba sebedume kakhulu kangangoba ezinye izikhungo zemfundo ephakeme sebezithathele phezulu ngokukhetha ezinye njengazo izwi lonyaka e 2015.
Ukudalwa kwalezi zifanekiso ezibonakalayo ikakhulukazi kubangelwa u-Shigetaka Kurita. Ngenxa yalokhu, abasebenzisi bangaleso sikhathi bamele zonke izimo bezisebenzisa ezinhlamvu ezingu-160 ezivunyelwe yimiyalezo.
Ekuqaleni i-emoji ibikhawulelwe kubukhulu obungu-12 x 12 amaphikiseli ikakhulukazi ngenxa yemikhawulo yobuchwepheshe bezithombe yangaleso sikhathi. Njengoba lezi zethulo ezibukwayo bezingekho ngaphansi kwelungelo lobunikazi, abathengisi abaningi baseJapan bathathe ithuba lokuzenzela ezabo izithombe.
Ngenxa yalokhu okungenhla, namuhla lezi zimpawu zisetshenziswa kaningi futhi ziwusizo olukhulu lapho kubhalwa noma yimuphi umyalezo.
Zisetshenziselwa ini kuWhatsApp nakuFacebook?
Ama-emoji ekuqaleni ayesetshenziswa emilayezweni ukuze amele imizwa ethile. Nokho, ngezinguquko zanamuhla zobuchwepheshe, zihlanganisa imiqondo evela ezihlokweni ezihlukahlukene ukuze ubonise izimo ezihlukahlukene zempilo yangempela ngendlela engcono kakhulu.
Ezifundeni zikaWhatsapp, Facebook kanye ne-Instagram ziwusizo kakhulu, nakuzo zonke izingxoxo ukuze ubonise imizwa efana nenjabulo, intshisekelo, ithemba, uthando, ukuziqhenya, ukuzola, ukubonga, ugqozi, ukuziqhenya nokunye okuningi. Futhi bakunikeza indawo yokuveza imizwa efana nenjabulo, uthando, ububele, ukumangala, amahlaya, ukudabuka, intukuthelo, phakathi kokunye.
Njengesibonelo salokhu okungenhla, ungasebenzisa ubuso obuvela kukhibhodi yakho yedijithali ukumela ukuthi uzwa ukudabuka okujulile ngesizathu esithile. Futhi benza kube lula kuwe ukukhombisa izikhathi zakho zenjabulo noma ukushintsha kwemizwa yakho.
Lezi zithombe zikusiza ukuthi unciphise inani lamagama ofuna ukuwaveza, njengombono wokuhamba ngezinyawo, ukuya ezitolo, ukulala, ukudla isidlo esimnandi, njll.
Imaphi ama-emojis noma izithonjana ezisetshenziswa kakhulu ezifundeni ze-Facebook ne-WhatsApp?
Lapha sethula amanye ama-emojis ajwayelekile ezimeni ze-WhatsApp ne-Facebook kanye naku-Instagram.
Uma uzwa uthando ngothile, ufuna ukuba nothando noma umangazwe ubuhle bomuntu noma into, ungasebenzisa i-emoticon yothando. Ubuso obujabulile obunezinhliziyo ezimbili emehlweni bumelwe.
Olunye lwezimpawu ezisetshenziswa kakhulu i-emoji ethukile noma ememezayo., ubuso obumangele obumele ukwesaba noma ukwethuka futhi ungabusebenzisela ukudlulisa okuvelayo noma umthelela.
I-emoji ecwayiza iso imele enye yezindlela ezimbi kakhulu zokukhombisa uzakwenu ukuthi kufanele ube ukuhlanganyela kokuthile noma umane umumemele kugeyimu.
Uma ufuna ukudlulisa ukudabuka, kunobuso obukhalayo obuveza kalula. Ukukhathazeka okujulile futhi kungakusiza ezikhathini ezinzima kakhulu.
Okushaphu kuyasiza ukukhombisa isivumelwano, ukugunyaza noma imvume ngesenzo esithile noma umbono wabanye.
Uphinde uthole i-emoji noma ubuso obungakholwa kuwusizo kakhulu ukudlulisa ukungabaza ngombono ophakanyiswe abantu besithathu. Imelwe ubuso bokungakholwa, obunamajwabu amehlo akhululekile.
Uphawu olunezinyembezi zokuhleka noma zenjabulo luyathandwa futhi ngoba lukusiza ukuveza injabulo eyeqisayo, ukuhleka noma ukukhombisa ukuthi awukwazi ukuyeka ukuhleka ngokuthile. Ungayibona kalula ngobuso bayo obumamathekayo obunamathonsi amabili, elilodwa esweni ngalinye.
Enye yezithombe ezidume kakhulu yi-face kiss yenhliziyo. Ubuso obuthumela ukuqabula futhi kuyisithombe sothando esingenza noma ubani azizwe ejabule.
Umdansi we-flamenco uwuphawu olukhuluma ngesifiso sokuya ephathini. Ungayisebenzisa kahle ukukhombisa ukuthi ufuna ukushiya ikhaya lakho amahora ambalwa futhi ube nesikhathi esimnandi.
Kungani kubalulekile ukwazi incazelo eqondile yezithonjana noma ama-emoji?
Kwesinye isikhathi abantu babelana ngencazelo yama-emoji ngendlela engalungile, mhlawumbe ngenxa yokushoda kolwazi noma ngenxa yokuthi indawo yamasiko ibanikeze ukusetshenziswa okuhlukile isikhathi eside, okuholela ekuthathweni kwabo ngokulinganayo.
Iqiniso liwukuthi isithombe-mzwelo ngasinye sinegama elisemthethweni kuyisiqalo sokuyinikeza incazelo endaweni oyisebenzisayo, ngoba uma kungenjalo, kungase kube nokungaqondi kahle futhi kungacasula, kungakhululeki noma kube namahloni ngokungaqondi ukuthi lobo buso obuncane busho ukuthini.
Ngokwesibonelo, kukhona izethulo ezibonisa izaga zesiShayina njengalezo zezinkawu ezintathu. Lezi zisho ukuthi Ungabuki Ububi, Ungezwa Okubi, Ungakhulumi Okubi, kanti nokho abantu basebenzisa lobu buso ngabunye ukukhombisa usizi, ukugqolozela, noma ukugcina imfihlo.
Uphawu lwe abesifazane abanezindlebe zonogwaja kuyafana nokuvusa inkanuko, kodwa abantu bavame ukusebenzisa le emoji ukukhombisa ubumnandi, injabulo, noma injabulo. Lokhu ikakhulukazi emaqenjini abangani noma abangani futhi kufaka phakathi izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Instagram noma WhatsApp.
Uma kukhulunywa ngokumela ukukhala, ukumangala noma ukwethuka, abantu bavamise ukusebenzisa i-emoji yobuso bebeke izandla ezihlathini. Kodwa-ke, lolu phawu luhlobene nomsebenzi we-Edvard Munch edumile.
Uthola nophawu lwendle, ngezinye izikhathi oluzenza u-ayisikhilimu kashokoledi okhilimu. Iqiniso liwukuthi ukudalwa kwayo kuhlobene nesiko lamaJapane futhi imele inhlanhla.
Njengoba sichazile ezibonelweni ezedlule, i-emoticon ngayinye inencazelo yayo, nakuba abantu abaningi beyinikeza eyabo. Kodwa kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuwakhomba ngendlela okufanele kube ngayo ukuze ukuxhumana kungabi namanzi futhi imiyalezo ingaqondwa kabi.
© 2022 EmojisWiki.com · Wonke Amalungelo AgodliweUmgomo Wamakhukhi Singobani?